Ururka isku xirka dhalinyarada (CYL) oo kulan wadatashi ah ugu qabtay Cadaado odayaal iyo dhalinyaro | khaatumonews
Ururka isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Central Youth Link (CYL), ayaa maanta kulan wadatashi ah ugu qabtay degmada Cadaado ee xarunta shirka maamul u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Ø In Ergada loo xil saaro ansixinta dastuurka oo kaliya, baarlamaankana ay odayaasha dhaqanku soo xulaan, kaddibna ay doortaan madaxweyne, si looga baaqsado samaynta Maamul KMG.
Ø In la xareeyo odayaasha iyo ergada hartay, lana qanciyo beelaha aan wali soo xarayn odayaashooda iyo ergadooda.
Ø In dhallinyaradu kaalin mugleh ku yeeshaan geeddi-socodka dhisidda maamulka gobollada dhexe, isla mar ahaantana ay qayb muuqata ku yeeshaan hoggaanka hay’adaha maamulkaas la dhisi doono.
Ø In laga dhawro hab-socodka shirka faragalin kasta oo aan munaasab ahayn dhankay doontaba haka timaaddee
Ø In cid kasta guddiga farsamadu uu noqdo mid bulshada ay heli karto, goorta ay rabaan si talo iyo tusaaleba loogu biiriyo, loogana saxo khalad kasta oo bulshadu dareento…
mCDRBT trfctwcrjedn, [url=http://ccomibgthoon.com/]ccomibgthoon[/url], [link=http://nauoqzzmhmoj.com/]nauoqzzmhmoj[/link], http://tnrgrtcjlfjp.com/